Sacuudiga oo 10 Million Dollar ugu deeqay wax ka qabashada Abaaraha Soomaaliya
Amiir Maxamed Bin Nawaaf Bin Cabdicasiis Safiirka Dowladda Sacuudiga u qaabilsan Dalka Ingiriiska ayaa sheegay in Dowladdiisa ay Soomaaliya ugu yabooheyso 10 Million oo Dollarka Maraykanka ah si wax looga qabto Gargaarka dadka ku tabaaleysan Soomaaliya.
Hadalkaan ayuu ka jeediyay Safiirku Shirkii London ee looga hadlayay Arrimaha Soomaaliya, waxaana uu Rajo fiican ka muujiyay in Soomaaliya ay ku guuleysato Xasiloonideeda,Kobaca iyo Horumarkeeda.
Sacuudiga ayaa soo dhaweeyay Isbedelada ka hana qaaday Soomaaliya wixii ka dambeeyay Doorashadii Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo.
“ Ma cusleysaneyno in aan mar kale soo cusbooneysiino in aan xoojineyno Garab Istaaga Boqortooyada Sacuudi Arabia Walaalaheeda Soomaaliyeed” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Safiirka Sacuudiga ee UK Amiir Maxamed Bin Nawaaf Bin Cabdicasiis.
Dhinaca kale Safiirka ayaa ku nuux nuuxsaday in dhibaatooyinka la dagay Soomaaliya wax laga qaban karo haddii la xoojiyo La dagaalanka Argagixisada , Al Shabaab, iyo Daacish oo sabab u ah Qaxootiga Soomaaliyeed ee Dalkooda isaga soo cararay , la dagaalanka Burcadbadeeda iyo dib u dhiska Hay’adaha Dowladeed.
Waxa uu intaas sii raaciyay Amiir Maxamed Bin Nawaaf in dowladdiisa ay dhanka Beni’aadanimada Soomaaliya horay ugu bixisay lacag dhan 1 Billion iyo 200 oo Million Dollar welina ay u taagan tahay ay ku bixiso Caawinaad dheeraad ah.
Ugu dambeyn ayuu halkaas uga dhawaaqay Wakiilka Boqortooyada Sacuudiga u fadhiya Ingiriiska in Sacuudigu 10 Million Dollar hor leh ay uga qeyb qaadaneyso wax ka qabashada Arrimaha Beni’aadanimo ee ka taagan Soomaaliya.